600 Dawladda Qatar iyo Beelaha Hawiye Oo Ka Shiray Arrin Xaasaasi Ah, | khaatumo news online
Jul 30, 2020 - 1 Aragtiyood
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo maalmaan ku sugnaa magaalada Muqdisho, isla markaana ka waday kulamo siyaasadeed ee beesha Hawiye ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Danjire Xasan Bin Hamza Asad Mohammed.
Qoraal kooban oo madaxtooyada Galmudug ay ka soo saartay kulankaas ayaa lagu yiri, “Safiirka Dowladda Qadar u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjire Hasan Bin Hamza Asad Mohammed ayaa Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye kusoo booqday hoyga uu ka deganyahay magaalada Muqdisho.”
Dowladda Qatar ayaa saameyn xooggan ku leh siyaasiyiinta Hawiye, oo ay hada u badan tahay inay dhexdooda laga soo zulu Raisal wasaaraha soo socda ee Soomaaliya .
Araar iyo hor dhac. Xasan Cali Khayre, oo ahaa R/wasaarihii loogu jaceyka iyo amaanta badnaa wixii R/wasaare soo maray, helayna waqti dahabi. M/weyne shacabku arkeen wadaniyadiisa ayaa u la yimi, nasiib xumo kuwii Alle iyo ummaddiisa Somaliyeed naceen ee tuugada iyo xaqdarada ku caan baxay, baa ka xaday R/wasaarahoodii ay jeclaayeen, iyagoo waliba siijecel, madax xanuun badan na ka qaaday doorasho dadban iyo meesha uu uga dhaqaaqay.
M/weyne Qoorqoor, waxaad maanta haysataa shacab ku jecel, oo kaa filaya sida Lafta Gareen wadani la duuban dawladda iyo shacabka Somaliyeed. Fadlan, “hibo Alle ku siiyey habeen laiskama qaado”. Xilku waa tijaabo, haddii lagu arko inaad Somali nadiifa oo dalkiisa u daacada oo hanan kara cadaalad ku dabaalida ummaddiisa, waxa kuugu xiga jagooyinka kuu hadhay ee ka sareeya, meesha aad hadda joogtid. Qoorqoorow murti baa tidhaahda “Nacas iyo nin ragga markay madax noqdaan, baa laka nacaa” Is jir oo is ilaali. WBT